Fahatsiarovana ny 29 martsa 1947 Hisy fampirantiana an-tsary sy an-tsoratra ny tantaram-pirenena
Feno 73 taona amin’ny 29 martsa ho avy izao ny fahatsiarovana ny nisian’ny tolom-panafahana tamin’ny taona 1947 teto amin’ny firenentsika ka
nanoloran’ireo Ray aman-dReny tany aloha ny ainy ho fanavotana ny firenena tsy ho lasa babo teo am-pelatanan’ireo mpanjanaka. Tsy handalo fotsiny ihany izany ho an’ny Ministeran’ny fiarovam-pirenena. Hisy mantsy ny hetsika izay karakarain’izy ireo ka ireo tanora mpianatra ankehitriny izay ho avin’ny ampitso no omen’izy ireo tombony amin’izany manokana. Ho an’ny omaly talata 17 martsa ohatra dia tetsy amin’ny LTC Ampefiloha no nisantarana izany. Fampirantiana an-tsary sy an-tsoratra ny tantaram-pirenena ho fampahafantarana ny taranaka sy ny mpianatra izay fanilon’ny fitiavan-tanindrazana no tanjona ka tsy ho very maina ny tolona nataon’ireo mpiady tia Tanindrazana. Hitohy ao amin’ny LMA Ampefiloha izany anio alarobia raha any amin’ny Lisea Ambohimanarina indray rahampitso alakamisy 19 Martsa. Hifarana ny zoma 20 martsa ho avy izao kosa ny hetsika ao amin’ny Lisea Jean Joseph Rabearivelo. Samy manomboka amin’ny 09 ora maraina avokoa izany, ary tsy hifarana raha tsy amin’ny 05 ora hariva. Tolom-panafahana 1947, ilo tsy very enti-mampandroso ny firenena no loha-hevitra entina manatanteraka izany.